माडी नगरपालिकामा राजनीतिक दलहरुले आ-आफ्नो उम्मेदवारको टुंगो लगाउने कसरत, को को छन त सम्भावना मा ? | Hamro Madi
माडी नगरपालिकामा राजनीतिक दलहरुले आ-आफ्नो उम्मेदवारको टुंगो लगाउने कसरत, को को छन त सम्भावना मा ?
चितवनको माडी नगरपालिकामा राजनीतिक दलहरुले आ-आफ्नो उम्मेदवारको टुंगो लगाउने कसरत जारी राखेका छन् । नेकपा एमाले , नेपाली कांग्रेसले मेयर र उपमेयरमा आफना उमेदवारको सिफारिस गरीसकेका छन । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफनो तर्फबाट मेयरको उमेदवार चयननै गरीसकेको छ । नेपाली कांग्रेसले मेयरमा खेम महत्तोलाइ अगाडी सारेको छ भने उप मेयरमा शिवमाया भट्टराईलाइ अगाडी सारेको छ । यस्तै नेकपा एमालेले मेयरमा सर्बसम्मत रूपमा श्याम कुमार बिस्ट, नारदमणी पौडेल र बिना तिमिल्सिना तथा उप(मेयरमा ताराकाजी महतो , चन्द्र कुमारी बानियाँ र नारायण पौडेलको नामावली पार्टी समक्ष सिफारिस गरेको गरीसकेको छ ।
माओबादी केन्द्रले कुनै निर्णय गरिसकेको छैन । पार्टी निकट श्रोतका अनुसार मेयरमा नगर संयोजक ऋषि काफ्ले, नगर ईन्चार्ज प्रभु महत्तो र शिक्षामन्त्रिका पिए ओमनाथ पाण्डे मध्ये १ जना हुने छन् । नेता ठाकुर ढकालले जिल्ला समन्वय समितिको सभापति वा प्रदेशको सासंदमा जाने गरि स्थानिय नेताहरुलाई बाटो खोलिदिने सम्भावना रहेको बताईएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मेयरमा मदन पौडेल् उठाउने निर्णय गरी सकेको छ भने उपमेयरमा भीमकुमारी मल्ल महतो ‘मीना’, धनकुमारी गुरुङ मध्ये एक लाई पठाउने तयारी गरीरहेको छ ।
यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ९ वटै वडाका वार्ड अध्यक्षका रुपमा छनौट हुने व्यक्तिको नाम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएको छ । वार्ड अध्यक्षका लागि दुई वा तीन जनाको नाम मध्येबाट एकलाई छनौट गर्ने काम हुँदैछ । वार्ड अध्यक्षका रुपमा १ नम्बर वडामा लेखबहादुर गुरुङ, तिलकुमार गुरौ, २ नम्बर वडामा विक्रम महतो, हरिकुमार श्रेष्ठ, भागीरथी महतो रहेका छन् ।
यस्तै ३ नम्बर वडामा ओमप्रकाश महतो, भिमबहादुर कुँवर मध्ये एक छनौट हुनेछन् । ४ मा कृष्ण पाठक, कृष्ण भुजेल, ५ मा हायाराम विक, कृष्ण तिवारी छन् । ६ मा रनमाया गुरुङ ‘वसन्ती’, काशीमाया तामाङ्, राजु पाण्डे छन् । ७ मा भोजराज आचार्य, सुरेश गुरुङ गणेश अधिकारी, ८ मा वीरेन्द्र बहादुर भण्डारी, सचिना खाँड छन् । ९ मा कुलबहादर दुरा, मोहनप्रसाद भण्डारी, दिलिप परियार छन् । २०७० सालको दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा माडी सहित बनेको तत्कालिन क्षेत्र नम्बर ५बाट राप्रपाका विक्रम पाण्ड विजयी भएका थिए ।
पहिलो संविधानसभाको चुनावमा तत्कालिन जनमोर्चा नेपालका ९हाल माओवादी केन्द्र० तर्फबाट अमिक शेरचनले जितेका थिए । ०५१ सालको चुनावमा कांग्रेसका तीर्थराज भुषाल, ०५६ सालमा कांग्रेसका नारायणशर्मा पौडेल विजयी बनेका थिए । ०५४ सालको स्थानीय निकायको चुनावमा भने एमालेले तत्कालिन ३ गाविसमा अध्यक्ष पद जितेको थियो । तत्कालिन संयुक्त जनमोर्चाले गर्दीमा अध्यक्ष पद जितेको थियो । माडीमा हाल २१ हजार ६ सय ७२ मतदाता छन् । १५ वटा मतदान स्थल रहनेछन् ।
बघौडामा मोटर साइकल दुर्घट्नामा २ घाइते
नेपालको पाँच अत्यन्तै खतरापूर्ण सडक